Togo : Manery an’i Faure Gnassingbé Ny Fikambanana Miaro ny Zon’olombelona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Febroary 2012 14:35 GMT
Vakio amin'ny teny English, srpski, Español, Français
Fanindroany tamin'ny taona 2012 ity, naneho ny tsy fahafaliany manoloana ny toe-draharaha miseho ao Togo ny Fikambanana miaro ny Zon'olombelona (Organisations de défense des droits de l’homme )(ODDH). Tamin'ny 11 febroary farany teo, nanao diabe tao amin'ny presidansa ny tompon'andraikitra ao amin'ny ODDH, ny mpitolona sy ny mpanohana. Ny mpisolovava Zeus Ajavon, filohan'ny Firaisankinan'ny fikambanana manohitra ny tsimatimanota ( Collectif des associations contre l’impunité ) (CACIT) nanazava ny anton'izao diabe-panoherana fanindroany izao:
Tamin'ny 12 janoary, no nikarakara diabe voalohany izahay ary nandefa fitakiana sy fampahatsiahivina maromaro tany amin'ny governemanta sy ny filoham-pirenena izy tenany mihitsy, niandry valinteny izahay na fanamarihana fa hatramin'izao , mangina ny onjam-peo.
Mbola nandefa fampatsiahivina maromaro indray ny ODDH izay nalefan'ny Togosite (tranokala Togo) manontolo.
Ny tranokalam-baovao togoley MO5 milaza fa an'arivony ny isan'ny mpanao fihetsiketsehana ary nanaraka ny fanombohan'ny diabe hatrany amin'ny farany hetsika izy:
Tamin'io Asabotsy io, olona an'arivony maromaro teny an-dalana tao Lomé no nentanina hihazo ny diabe nokarakarain'ny Fikambanana miaro ny zon'olombelona (ODDH). Antokon'ny Bè niantsoantso hoe « ampy izay ! Vonjeo Togo », nanakoako nandritra ny adiny telo manerana ny arabe marobe ao an-drenivohitra ny fiara mitanjozotra an'ireo mpanao fihetsiketsehana izay ny fiaran'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona no mitarika izany alohan'ny handehanan'izy ireo eny amin'ny torapasika ao Lomé, eo anoloan'ny lapan'ny filohan'ny Repoblika…
Tamin'ny fanombohan'ny lalao, Me Zeus Ajavon, filohan'ny CACIT, nanao lahateny fiarahabana amin'ny anaran'ny fikambanana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana . Nisaotra azy ireo izy noho ny fanentanana satria, araka ny teniny, “Ny fahatongavantsika rehetra mponina togoley no hanavotra an'i Togo”.
Fihetsiketsehan'ireo mpanao gazety tao Togo, sary tao amin'ny M-Togo.com
Ramatoakely Fabbi Kouassi ao amin'ny “SOS mpanao gazety tandindon-doza”, namaky ny fanambarana nataon'ny ODDH. Nilaza izy fa manao fanamarihana momba ny fahanginan'ny manampahefana taorian'ny diabe voalohany nokarakarain'ny ODDH tamin'ny 12 janoary lasa teo ny fanambarana :
Nihevitra ny ODDH izay nanao sonia izany fanambarana izany fa ny firoboroboan'ny fikarakarana kitoatoa sy ratsy sy mitotongana, izay mikendry hampijaly mafy ny olona mba hanerena azy ireo hanao fiaikena, arahina tsy fisaziana, no midika ho sakana amin'ny fanajana ny firenena Tan-dalàna, amin'ny fampandrosoana ka vokatr'izany, miantraika amin'ny fivelarana araka ny tokony izy ho an'ny olombelona amin'ny ankapobeny izany sy ho an'ny olom-pirenena togoley indrindra indrindra.
Fihetsiketsehan'ny "SOS Mpanao gazety tadindonin-doza"
Jil-Bénoit Afangbédji nampatsiahy indray ny fitakian'ny ODDH.
Ferdinand Ayité, filohan'ny “SOS Mpanao gazety tandindoni-doza” nilaza tamin'ny mpanatrika ny hetsika amin'ny fisian'ny fikasana haka an-keriny ary efa niharan'izany ilay mpanao gazety Marx-Savi Carmel ao amin'ny Tribune d’Afrique raha nanao famotorana momba ny resaka fahavetavetana nahavoarohirohy ny filohan'ny antenimieram-pirenena, El Hadj Abass Bonfoh” izy.
Tamin'ity fanetsiketsehana efa miverimberina ity indray, araka ny filazan'ny pa-lunion, sy ny tranokala tsy mbola ofisialy an'ny repoblika togoley, niantso ny mpanohana azy ireo ny antoko politika mba ho tonga amin'ny fihetsiketsehana.
« Ny Dina Demokratika An'ny Vahoaka Afrikana (La Convention Démocratique des Peuples Africains) (CDPA, an'ny mpanohitra) Léopold Gnininvi sy ny Fikambanana Ho Fanarenana Miaraka An'i Togo Miray hina( l’Organisation pour Bâtir dans l’Union un Togo Solidaire ) (OBUTS, mpanohitra) an'ny Praiminisitra teo aloha Agbéyomé Kodjo no niantso ireo mpanohana azy tamin'ny alakamisy mba ho tonga marobe amin'ny asabotsy heriny ho amin'ny « diabe milamina» karakarain'ny Fikambanana mpiaro ny zon'olombelona (ODDH) izay fantatra fa atao Lomé mba« hanoherana ny fanitsakitsahana lavareny ny zon'Olombelona ».
Tsara marihina ihany koa fa ho avy hanatevin-daharana ny hetsi-panoherana ireo vehivavy mpivarotra nilaza fa nofetsifetsena tamin'ny tranom-barotr'izy ireo tamin'ny 11 janoary 2010, raha mbola nividy entana tany Asia izy ireo tamin'izany fotoana izany.